Waaheen Media Group » Isku shaandhaynta la hadal hayo oo dalka ka abuurtay hadal hayntii ugu badnayd
Browse:Home Sports Isku shaandhaynta la hadal hayo oo dalka ka abuurtay hadal hayntii ugu badnayd	Isku shaandhaynta la hadal hayo oo dalka ka abuurtay hadal hayntii ugu badnayd
0 Comment	Ilaa hada lama oga qorshaha uu Madaxweyne Siilaanyo ku feegan yahay ee la xidhiidha hadal haynta in uu Golihiisa Wasiiradda ku samaynayo isku shaandhayn isugu jirta xil ka caydhin iyo magacaabis mansabyada kala duwan ee Xukuumaddiisa, hase yeeshee waxa soo baxaya walaahow dadka qaarkood ka soo waajahay arrintan oo ay ka mid yihiin kuwa Xilalka haya iyo kuwa raajicinaya labadaba.
Wallow aan si rasmi ah loo ogayn goorta iyo tirade ay saamayn doonto arrintani hadana ilo wareedyada suuqa la isla dhex marayo ayaa tibaaxaya masuuliyiinta saaxada ka bixi doona iyo kuwa soo geli doona wakhtiga dhaw ee farta wadnaha lagu wada hayo.
Tibaaxaha ugu danbeeyay ayaa sheegaya in qasriga Madaxtooyadda looga yeedhay rag badan oo ay ka mid yihiin Wasiirkii Madaxtooyadda xiligii Marxuum Cigaal Jaamac Saalax, Wasiirkii Duulista Hawada Wakhtigii Rayaale Cismaan Xasan Mire, Wariye Ducaale, Maxamed Xuseen Mu’adinka, iyo Wakiilka Addis ababa u fadhiya Somaliland.
Sidoo kale waxa la hadal hayaa rag kale oo Telefoono iyo Farriimo lagula xidhiidhay, kuwaas oo qurbaha looga gacan haadiyay oo uu ka mid yahay Maxamed Biixi Yoonis oo ah sarkaal ka shaqeeya mashruuca Qaramada Midoobay ka wadaan Dalka Koonfurta Suudaan ee Daarfur.
Lama oga ragan xilalka loo dhiibi doono, hase yeeshee tuhunada laga qabo kulamada loogu yeedhay ayaa wax aka mid ah in Cismaan Xasan Mire lagu bedelayo wasiirka Warfaafinta Abiib Diiriye Nuur oo la hadal hayo in uu hore u codsaday in laga bedelo Wasaradda Warfaafinta. Abiib lama oga jagada loo bedeli doono, hase yeeshee ilo wareedyo madaxtooyadda u dhuun daloola ayaa sheegaya in loo magacaabi doono Wakiilka Jabuuti.
Maxamed xuseen Mu’adinka oo ah Guddoomiyaha Jamada Alpha oo ka soo jeeda beesha Wasiirada Aw-qaafta iyo Cadaaladda ayaa la filayaa in mid ka mid ah kuraastaas lagu fadhiisiiyo, wallow dadka qaarkood oo u dhuun daloola xidhiidhka isaga iyo xukuumadda ka dhaxeeyaa aanu buurnayn, hadana waxa jira sida la hadal hayo in Guddoomiyaha Golaha Guurtidda oo ay aad isugu dheer yihiin badka soo dhigay, iyadoo loo aanaynayo in uu beeshiisa saamayn badan ku leeyahay, wakhtiyadan danbena xiisada beesha iyo xukuumaddu kacsan tahay.
Jaamac saalax ayaan la garanayn ilaa hada kursiga loo qoondeeyay, hase yeeshee warar ayaa sheegaya in loo dhiibi doono wasaaradda Waxbarashada oo loo kala saari doono laba wasaaradood oo kala ah Waxbarashada iyo tacliinta sare in loo dhiibi doono Tacliinta sare, iyadoo Agaasimaha Waaxda Tacliinta sare ee wasaaradaasi ay isku beel yihiin.
Aadan Nuux Dhuule oo ah xubnaha ugu dhaw qasriga Madaxtooyadda ayaa la hadal hayaa in laga dhigi doono xafiiskii Wasiir Xirsi Golaha Wasiiradda ka soo fuulay ee Chief of Cabinteka, halka Saaxiibkii Ducaale oo ay isku wariyayaal ahaan jireen isna lagu wado in uu noqdo Af-hayeenka Madaxtooyadda Somaliland, kursigaas oo aad loo tabey.
Wasiir Geel-jire ayaa wararka soo baxaya farta ku godayaan in uu salaanka ka siiban doono, iyadoo wararka ugu badan ee soo baxayaa sheegayaan in uu sahayan doono Proff Axmed Ismaacii Samatar oo uu gacan yare u ahaa mudadii uu dalka ku sugnaa, kaasoo aanay Xukuumaddu mahadin soo dhaweyntiisa gaar ahaana markii laga waayay wixii laga filayay oo ahayd in uu qadiyadda Somaliland si toos ah u taageero.
Ilo wareedyadu waxay hadal hayaan in Wasiir Geel-jire kursigiisa la siin doono Cali Maxamed warancade, balse Cali Xilka loo dhiibayo ayaa isna lagu sheegayaa dhanbal ka mid ah wasaaradda Arrimaha Gudaha oo loo kala qaadi doono Amniga iyo la dagaalanka Argagixisada iyo wasaaradda Arriamaha gudaha.
Wasaaradan la kala dhanabalayo waxa la sheegayaa wasiirka haysta Maxamed Nuur Caraale Duur in laga qaadi doono, iyadoo la hadal hayo in uu dhaafi doono Golaha iyo in uu ku sii negaan doono oo la geyn doono Wasaaradda Xanaanada Xoolaha oo ay dadku aad ula jecel yihiin.
Wasiirka Boosaha iyo Isgaadhsiinta ayaa isna la hadal hayaa in uu ka mid noqon doono wasiiradda la weydaarin doono xayndaabka hase yeeshee ilaa hada ma cada cida beeshiisa ah ee ay xukuumaddu dhigi doonto halkiisa.
Wassiiradda Maaliyadda, Madaxtooyadda iyo Arrimaha dibeda ayaa iyaga laftooda dadweynuhu waxay ishaarayaan in meelaha ay joogaan laga rari doono hase yeeshee ilaa hada way ku kala afkaar duwan yihiin dadku, oo xog iyo saadaal midna kama hayaan inkasta oo warar hoose sheegayaan in Hogaanka Xisbiga lagu wareejin doono oo ay isku noqon doonaan Guddoomiye iyo ku-xigeen.
Halka Maxamed C/laahi isaga farta lagu godayo Daarfuur in ay liqi doonto, wallow Masuulka daarfuur looga gacan haadiyay la leeyahay waxa uu ka dhaxeeyaa UCID iyo Kulmiye oo wali iskumaba luga duwan ee lab aka dhaxeeye ayuu ku jiraa, laga yaabo Maxamed C/laahi in uu ku sii negaan doono Kursigiisa.
Maxamud Xaashi, Cali Siciid Raygal, Gacamay ayaa la hadal hayaa in au kuraastooda rag beelahooda ahi kulaalayaan laakiin ilaa hada lama hayo in uu Madaxweyne Siilaanyo uga kicin doono iyo inkale.
Si kasta ah ahaatee saadaasha ay dadku ka bixinayaan Isku shaandhaynta dadka wareerisay ayaa la filayaa in uu dhawaan madaxweyne Siilaanyo daawaha ka qaadi doono, waliba maaha goor sii fog, waxa la filayaa in uu ugu wan qalo sanad guuradiisa sadexaax ee uu talada Dalka shookaanta u hayay oo ku began Bishan July.